Ukhala ngobugqila bocansi uSkolopad
IZIBAZI abe nazo ngemuva kwengozi yemoto, uthi nazo zithela usawoti esilondeni uSkolopad
bongiwe zuma | July 1, 2019
UZIZWA engelutho futhi eyisahluleki usaziwayo othi usephenduke inkundla yocansi kwabesilisa abadumile nabahlonishwayo kwezokungcebeleka, abamfuna ucansi bemthembisa impilo engcono embonini.
UNonhlanhla “ Skolopad” Qwabe owazakhela udumo ngokuveza umzimba emicimbini, uthi ubhuquziswa wukhwantalala, uselahlwe nayindodakazi yakhe ebimeseka.
“Emasontweni amabili edlule ngidlale owesilisa odumile, othe ukuze angisize ngisimame kule ndima, kumele ngilale naye. Ngikwenzile lokhu kodwa akasayingeni eyami,” usho kanje.
Uthi bekungekhona okukuqala, ngoba nomunye uDJ uke wambizela emzini wakhe eGoli, ethi abazoxoxa ngokuthi uzomsiza kanjani akwazi ukuqopha umculo.
Efika eGoli uthi uDJ uyishintshile inkulumo, wafuna ucansi okwagcina ngokuthi balale maqede wangamsiza, okunalokho wahambe ekhuluma kabi ngaye.
“Unkosikazi kaDJ wangena ephezu kwami ezibiza ngocansi. Okwangimangaza wukuthi kwaxolisa yena unkosikazi ngokusiphazamisa. Ngakusasa kwathiwa akangihambise. Savumelana nenkosikazi ukuthi ngizozihambela, uma engishayela ucingo ngiqambe amanga ukuthi ungihambisile ngoba indoda yakhe yayizoxabana naye. Ngabona nokuthi labantu abadumile bakwazi ukwenza noma yini abayithandayo. Ngabona nokuthi kanti abanye abantu besifazane bahlukumezeke kanjani,” kusho uSkolopad.
Ngesikhathi uSkolopad ebalisa, ubekhala aze abe nesibibithwane kucacile ukuthi ngempela uhlukumezekile emphefumulweni.
“Ngibona sengathi le nto iwumkhokha noma bayatshelana ngoba bonke balokhu befuna ukulala nami. Badumile, ngiyasaba ukubagagula ngoba bangaqeda ngami. Ngilokhu ngithule ngisaba ukuthi abantu bazothi nginamanga noma ngifuna ukubukwa nodumo.
USkolopad uthi yize ewunesi kodwa ubecabanga ukuthi naye angakwazi ukusebenza kanzima agcine ephumelele kwezokungcebeleka.
“Uma ngigqoka izinto ezimfishane, ngisuke ngakha igama ngifuna ukwaziwa njengomculi, hhayi ngoba ngifuna ukubanjwa amadoda. Angazi kumele ngenzenjani impilo yami iphelile. Okungiphatha kabi wukuthi ngihlala ngibabona njalo sekuyangihlukumeza nalokho. Uma ngitshela abanye abaculi besifazane abangisizi,” kubalisa uSkolopad.
Uthe abazali bakhe bazimisele ukumsiza bamkhokhele izindleko enkampanini engasiza imkhulise emculweni.
“Ngifisa ukuthola abantu abazongisiza ngaphandle kokufuna ukulala nami. Angisazi kumele ngenzenjani. Sengiqala nokuxabana nengane yami. Seyize yangitshela ukuthi ayisayiboni kahle le nto yomculo kungcono ngiyeke. Kuyimanje ayingikhulumisi ngoba ibona ukuthi ngiyisahluleki.”
Uphethe ngokuthi useyeke ukudla imishanguzo yokhwantalala ngoba uyabona ukuthi ayimsizi ngalutho kunalokho iyamkhathaza.
Nakuba enezinkinga uthe ngoMsombuluko ubuyele emsebenzini futhi nozakwabo bayameseka kwabhekene nakho.
Indaba yokulimala engozini yemoto abe nezibazi, uthi nayo yengeze usawoti esilondeni njengoba nayo iyingxenye yezinto ezimphathise ukhwantalala.